Waxa Ay Ula Dhigantahay Ku Laabashada Barcelona, Waxa Ay Ula Dhigantahay In Uu Ka Hortago Kooxdiisii Hore & Wax Walba Oo Uu Cesc Fabregas Ka Hadlay Ka Hor Kulanka Barcelona – Kooxda.com
Home 2018 March Ingiriiska, Wararka Maanta Waxa Ay Ula Dhigantahay Ku Laabashada Barcelona, Waxa Ay Ula Dhigantahay In Uu Ka Hortago Kooxdiisii Hore & Wax Walba Oo Uu Cesc Fabregas Ka Hadlay Ka Hor Kulanka Barcelona
Waxa Ay Ula Dhigantahay Ku Laabashada Barcelona, Waxa Ay Ula Dhigantahay In Uu Ka Hortago Kooxdiisii Hore & Wax Walba Oo Uu Cesc Fabregas Ka Hadlay Ka Hor Kulanka Barcelona
March 12, 2018 · by	Abdi Weli Aadan · 0
Waxa ay ahayd 17-kii bishii May 2014 markii uu Cesc Fabregas Barcelona u ciyaaray kulankiisii ugu dambeeyay ka hor intii uuna ku biirin kooxda Chelsea halkaas oo uu ku qaatay wakhti fiican waxana uu sheegay in ka hor imaanshaha saaxiibkiisa Lionel Messi ay dhiiri galiso.
Waxa ka soo wareegtay 46 bilood markii uu Fabregas ku ciyaaray Camp Nou waxana uu haatan ku soo laabanayaa markii labaad waxana si fiican u soo dhawayn doonta kooxda.
Waraysi uu siiyay wargayska Marca ayuu xiddigii hore ee Arsenal kaga hadlay sababihii uuga tagay Barcelona iyo waliba noloshiisa haatan ee Chelsea iyo sida ay kooxdiisa chelsea u dhaawici karto rajada Barcelona ee champions league.
Miyaad Ogayd in uu Kulankaas Noqon Lahaa Midkii Ugu Dambeeyay ee aad u ciyaarto Barcelona?.
“Kumaan ciyaarin kulan kaliya halkaas tan ilaa maalintaas ma ogayn in uu noqon doonay kulankaygii ugu dambeeyay ee kooxda laakiin xaqiiqda ayaa ah in aad aad u xanaaqsanaa maalintaas oo dhan”.
Maxay kuula dhigan tahay in aad u soo laabato Magaalada Barcelona?.
“waa isku jir rabitaan iyo Qarsoodi, waxa uu noqon doonaa kulan adag 90-ka daqiiqo ee Camp Nou waa wakhti ku dheer koox walba oo booqata, waxa aan u shaqaynaynaa si fiican waxana aanu sugi laanaha tartanka, diyaar ayaanu nahay”.
Waxa aad ka hor tagi doontaa saaxiibadaadii hore ee sida Pique iyo Messi sidee ayaa dareemaysaa?.
“waan jecelahay in aan ka hor tago saaxiibaday, waxa aad dareemaysaa dhiiri galin dheeraad ah”.
Dareen Noocee ah ayaad dareentay markii aad horay uga hor timid Barcelona?.
“waa dareen mar walba fiican, waxa aan horay uga hor yimid aniga oo Arsenal jooga haatan chelsea, waxa aan dareemay wax fiican labada jeerba, ima dhibto in aan ka hortago kooxdaydii hore ama saaxiibadyadii hore, way i dhiiri galisaa”.
Sidee Ayaa u filaysaa in ay taageerayaashu kuu soo dhaweeyaan?.
“Taasi muhiim mahaa, kulanku waxa uu ka dhexeeyaa Barcelona iyo chelsea, waxa aniga igu dhacaya waa midka 2-aad ee muhiimka ah, waxa aan doonayno ayaa ah in aan u soo gudubno wareega xiga, wax kale maya”.
Kulanka waxa aan ka ciyaari kartaa booska saaxiibkaa Lionel Messi sidaa ayaa u aragtaa?.
“Hadii aan nasiib leeyhaay in aan ciyaaro, waa run in aan ku fiicanahay isku boos, joojintiisu waxa ay noqon doontaa mid adag laakiin waxa aan isku dayi doonaa wax walba oo suurtagal ah si uuna u dareemin raaxo una soo bandhigin qaab ciyaareed fiican”.
Maxad u malaysaa marka aad isaga ku aragto kooxda kaa soo hor jeeda, miyaad u aragtaa mid kula xafiiltama mise Saaxiib?.
“Waxa aan u arkaa mid ila xafiiltama oo doonaya in uu guul gaaro, aniguna waxa aan doonayaa sidaas, waxa aan u ciyaaraynaa laba kooxood oo kala duwan, xiddig walba waxa uu kooxdiisa la doonayaa wax fiican,sida iska cad waa in aad mar walba is qadarisaan”.
Hadii aad qiimayso kulanka, Chelsea waxa ay u baahantahay hal gool, waxa aad soo marteed tartan kan ka adag, ma ku raacsantahay?.
“haa way adagtahay, Camp Nou wuu weyn yahay waana inaad orodo in badan laakiin waxa aan u shaqayn doonaa si wada jir ah, arinta furaha ah ayaa ah in aanu ka faa,iidaysano fursadeena, waa in aanu ciyaarno ciyaarteena, iyo in aanu dhaawacno marka ay suurtagalka tahay, uma tababaran taatiko ahaan sida aan ugu tababarto intaas joogay chelsea,waxana aan u muujiyaa garoonka, waa mid wax walba la iska dalbanayo waxana aanu ku dambaynaa in aanu ka faa,iidaysano”.
Todobaadkii hore Juventus ayaa booqatay Tottenham iyada oo ku jirta xaalad la La Mid ah midiina miyaad ka qaadateen kulankaa?.
“Kulamada wakhtigan waa muhiim ah in aad dadaasho sida ugu muhiimsan, Juventus may lahayn wax fursad ah laakiin labadooduba waxa ay dhaliyeen goolal, kulanku waxa uu is badalay daqiiqado waana sababta ay muhiim u tahay in aad ka faa,iidaysato wakhtigaaga, waan ognahay in nalooga baahan yahay in aan gool dhalino, laakiin kulamada noocan oo kale ah waa in aan maskax ciyaarto oo aanad bilogaba ku deg-degin in aad raadiso goolka”.
Bar-barihii 1-1 ahaa ee lugtii hore ma ahayn mid cadaalad ah marka loo eego qaab ciyaareedka iyo wixii dhacay maxaad dareemaysay kadib kulanka?.
“Waxa ku adkayd in ay fursado sameeyaan, xitaa hadii ay runtahay oo ay Barcelona maamulaysay dhanka baaska ciyaarta, nagumay dhaawicin arintaas, markii aanu weerarka ku qaadaynay waxa aanu u qaadnay sabab waxana aan ku jirnay khatar, goolkooda ayaa ka yimid hal khalad kaas oo uu samayn kara mid kasta oo naga mid ah laakiin bar-baro aan la galnay Barcelona maaha natiijo xun”.
Miyaad Ku dabaal Degi hadii aad Gool ku dhaliso Camp Nou?
“Run ahaantii kama fikirin arintaas gabi ahaanba, waxa aan kaliya dhaliyay laba gool xilli ciyaareedkan, waxa ka soo wareegtay wakhti markii aan dhaliyay goolkaygii ugu dambeeyay, Waxa jira dareen wakhti xaadirkan aanad saadaalin karin, ma odhan karo ma dabaal degayo, laakiin uma badna in aan samayn doono, uma malaynayo in aan fursad u heli doono marka loo eego booska aa ka ciyaarayo, waxa uu tababaruhu i waydiistaa wax yaabo ka duwan kuwa kale, ma garan kartid kubada waxa aan rajaynayaa in ay dhacdo laakiin kama fikirin wali”.
Marka Dhan la eego Suurtagal maaha in ay Chelsea tartanka ka reebto Barcelona, miyaad dareensantahay sidaas?.
“Taasi waa in ay ahaato maskaxda aanu ku gali doono kulanka, kuma gali karno Camp Nou anaga oo si xun u fikirayna, waa in aanu wax fiican ka fikirno, waa in aanu ku raaxaysano kulanka weyn”.
Maxad ku dooratay in aad ku biiro Chelsea?.
“Mourinho ayaa igu qanciyay, waxa uu wax walba iiga dhigay wax cad, waxa aan haystay dalabyo kale laakiin markii aan isaga la hadlay waxa aan ku qancay in aan ku biiro Chelsea”.
Real Madrid ayaa ah kooxda sida joogtada ugu guulaysata champions league, miyaad filaysay in ay dhaafi doonaan Paris-Saint Germain?.
“Waxa ay si cajiib ah ugu ciyaariin Paris, waan jeclaaday qaab ciyaareedkooda in badan Waxana ay u qalmeen in ay u gudbaan wareega xiga”.
Waa Maxay Waxa ay haystaan Ronaldo Iyo Messi ee Ka Caawiya In Qaab fiican soo bandhigaan sanad kasta?
“Waa xiddigo mar walba doona guulo kale, waxa ay u muuqataa in ay si cajiib ah horumar u sameeyaan sanad kasta, laakiin waxa ay haystaan wax lagu riyaaqo, waa laba xiddig oo waaweyn,kuwaas oo midba midka kale la tartamo, waxana sharaf ii ah in aan xirfad la wadaago”.
Dib U Eegid : Sedex Rikoor Oo Uu Mohamed Salah Klaa Baxay Kulankii Warford Ay Ku Xasuuqeen